Waa maxay Summad? | Martech Zone
Waa maxay Summad?
Monday, July 4, 2016 Jimco, Juun 8, 2016 Douglas Karr
Haddii aan qiran lahaa wax ku saabsan ku qaadashada labaatan sano suuq-geynta, waxay ahayd daacadnimo inaanan si buuxda u fahmin saameynta a brand dhamaan dadaalada suuq geynta. In kasta oo taasi u muuqan karto hadal hadal lagu qoslo ah, haddana waxaa ugu wacan culeyska abuuridda sumadda ama dadaallada cajiibka ah ee lagu hagaajinayo aragtida astaanta ayaa aad uga dhib badan sidii aan waligey malayn jiray.
Si loo sawiro isbarbardhig, u dhigma wuxuu ahaan lahaa nijaar ka shaqeysa guriga. Nijaarka ayaa laga yaabaa inuu fahmo sida loo dhiso derbiyada, looxakameeyo armaajooyinka, geeska iyo gogol, u dhigo saqaf, iyo asal ahaan inuu dhiso guri laga bilaabo aasaaska. Laakiin haddii aasaasku ka baxsan yahay xarunta ama uu dillaaco, wuxuu ogaan lahaa inay wax khaldan yihiin laakiin uusan fahmin sida dhab ahaan loogu sixi karo dhibaatada. Dhibaatadaasina waxay saameyn ku yeelan doontaa wax kasta oo uu ka shaqeeyo.
Khibrada iyo aragtida wax soo saar ama shirkad magac gaar ah leh, sida lagu bixiyay astaamaha lagu garto, naqshadaha xiga, iyo codadka matala.
Waa sababta aan had iyo jeer u keenno la-taliyeyaal caan ah howlaheenna maalmahan markaan weydiinno dhowr su'aalood oo aanan heli karin jawaabo cad ka hor intaanan bilaabin horumarinta istiraatiijiyad suuq-geynta macaamiisha:
Sidee matalaadda muuqaalka ee sumaddaadu u aragtaa rajooyinkaaga iyo macaamiishaadu?
Yuu yahay bartilmaameedka macaamilka iyo go'aan-qaadaha ee ku ganacsanaya astaantaada?
Maxaa kaa soocay tartamayaashaada? Sidee laguugu arkaa isbarbardhiga kuwa kula tartamaya?
Muxuu yahay codka nuxurkaaga iyo naqshadaha loo isticmaalay si wax ku ool ah loogula xiriiro rajooyinkaaga iyo macaamiishaada?
Haddii aad si dhow ugu fiirsato su'aalahaas, aad ayey uga yar tahay waxa aad rabto inaad abuurto iyo inbadan oo ku saabsan sida loo arko waxa aad abuureyso. Sida fiidiyowgu sheegayo, waa waxa dadku kaaga fikirayo xagga dareenka.
Fiidiyowgaan waxaa ka Borshoff waydiiyey oo ka jawaabayaa su'aasha fiidiyowgan laga soo qaaday dhawr sano ka hor markay soo mareen magac-bixin, Maxaa ku jira nooc?
Iyada oo si ballaaran loo korsaday warbaahinta dhijitaalka ah - oo ka kooban baraha bulshada, markhaatiyada, iyo waxyaabaha aan xaddidnayn - magacyadu waxay leeyihiin waqti aad u dhib badan oo ay ku ilaalinayaan sumcaddooda, hagaajinta sumcadooda, ama ku sameynayaan wax ka beddelidda sumaddooda. Wax kasta oo aad soo saarto ama ay soo saarto qof kale oo ku saabsan wax soo saarkaaga, adeegyadaada, shirkaddaada, iyo dadkuba waxay saameynayaan magacaaga.
Tags: hay'addaborshoffbrandsuuq geyn suuq geyn ahaqoonsiga sumcadsumcad sumadeedbrandingekspertenwaa maxay summad
Mustaqbalka Isdhexgalka Isticmaalaha: Beyond Touchscreens